अफिसभित्र कर्मचारीको कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ ? जानिराखौं – Saurahaonline.com
अफिसभित्र कर्मचारीको कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ ? जानिराखौं
अफिसमा काम गर्दा निकै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । व्यवहारकै कारण प्रिय वा अप्रिय हुने भएकाले राम्रो व्यवहार गरेर सबैको प्रिय बन्न सकिन्छ । बानी व्यवहारमा कमी कमजोरी भए तिनलाई हटाएर वा सुधारेर कार्यक्षेत्रका साथीभाइसँग मिलेर बस्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ : नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएपछि प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । अस्थिरता.....